Indawo eziGcina iYoga eziPhezulu eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Yoga eYurophu > Indawo eziGcina iYoga eziPhezulu eYurophu
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 26/09/2020)
Ukuba ukhangela ukuba babalekele kwiimfanta yoga phezulu eYurophu iholide yakho elandelayo, uqubha luck. Amanye amazwe ezintle aseYurophu nokuninzi anikele xa kufikwa yoga nokuphumla. Nangona Indiya ithathwa ukuba yoga ndawo kakhulu ehlabathini, BaseYurophu okunene baye olu qheliselo babambelela njengoko zabo. Nazi ezinye kwiimfanta yoga phezulu eYurophu, ngokunjalo iindlela zokuhamba apho ngololiwe:
Yoga kwiimfanta e Italy
Entle, ubuhle ukuzola ngokuqinisekileyo elevate umsebenzi wakho yoga - singasathethi lomoya ilanga ococekileyo. Ukuba into oyikhangelayo, ngoko Italy yiloo ndawo kuwe. Bonke gorgeous yoga retreat iindawo ukukhetha ukusuka, sithanda labo Tuscany. Wena ingathatha train ride bemvelo walityhutyha ilizwe ize iphele i uhambo kwi iyindawo yoga in Chianti. kwelanga Unokuhlonelwa., iwayini kunye nokuhlala ndizikhumbula kwaye langoku - oko kungaba ngcono?
Perugia ku Castellina Chianti Uqeqesha
Yoga kwiimfanta e France
Kwabo ilithanda gqitha ezintabeni, Alps French Uza kuba ithuba awukwazi miss. Okunye ngaphezu yoga rhoqo, ngo French Alps, yoga tshwa ungenza bentaba, yoga, umiso lwamanzi amhlophe, ngisho paragliding. Annecy yidolophu elikhulu Ndingaveleli na ke ngenxa yale njongo, kwaye unako ukufikelela kuyo ngololiwe Paris. It Ngokuqinisekileyo adventure oluhambelana abantu abakhetha ukuphila esebenzayo kakhulu.
Paris Annecy Uqeqesha
EGeneva ku Annecy Uqeqesha
Yoga kwiimfanta kwi UK
I-UK unemisebenzi yobuhle, obumangalisayo iindawo retreat ukuba, ezifana Glastonbury, Devon, Kent, Scotland, kunye nabanye. kunjalo, thina elanele London umoya wayo ezizodwa kunye nomoya. Ukuba ukhangela yoga ezidolophini ngaphezulu iyindawo amava, ke London Nantso ukhetho elungileyo. Inani kunokukhethwa kuzo ziza kwenza basonta yakho intloko - kukho into yonke yoga incasa. Unga lula ukufikelela isixeko ngololiwe ukusuka abaninzi kwizixeko ezinkulu eYurophu, ukuze enye bonus.
Jemani kuthatha ntle yayo kakhulu kwaye ngokuqhelekileyo idibanisa uqheliselo yoga amava Spa epheleleyo. Yinto ilungele kwiiholide xa ufuna uyitshaje iibhetri yakho sekusele kude indlela exakeke. Germany nokuba inika kwiimfanta cwaka ngokupheleleyo, a lot of ukuziqhelisa Ukucamngca kunye nonyango ezinkulu Spa. Ukuvumela cwaka kunye ukuthula endalo lokuhlamba uxinzelelo kude i iresiphi kakhulu lokuphumla. Ukuba oku kuvakala ngathi into onokufuna, uyakwazi babhukishe uloliwe kwi wohlobo Alps.
Ostriya othanda kwiimfanta yayo ebusika yoga, leyo eyenza kube indawo ephelele ngeli xesha lonyaka. Kutheni abuzwe isizini kuzo zonke isesebuqaqawulini bayo? Nokuba ukuba ucaphukela ebusika, wena sisingise ukuba siqonde indlela yoga kwiimfanta e Austria kube bolonwabo. Bethatha abandayo sezulu luwuphendule ngendlela ezempilo-nokukhuthaza, ukudibanisa izimbo ezahlukeneyo yoga, maphepha kunye nokuthula ubuthongo ukuba kunyuswe amajoni akho omzimba. Salzburg yenye sezixeko Austrian apho unokufumana le, kwaye unako ukufikelela kuyo ngololiwe.
Prague ku Salzburg Uqeqesha
Ulungele iphupha lakho yoga ngemoto komnye kwiindawo eziphezulu eYurophu? Incwadi amatikiti etreyini yakho kuba omnye kwiimfanta yoga phezulu eYurophu bokuqala amaxabiso phezu kweetrone!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fyoga-retreats-europe-train%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / pl ukuba / uyeke okanye / ru kwiilwimi ezininzi.
#enenjongo #uxolo #ukuphumla #Yoga europetravel train Travel